ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးလည်း အလိမ်ခံတတ်ကြသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးလည်း အလိမ်ခံတတ်ကြသည်။
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 21, 2012 in Creative Writing, Critic | 25 comments
ဦးဇော်မောင်၏ ၀၀ ပြည့်ပြည့် ဖိုးဝရုပ် မျက်နှာကြီး ဖြီးနေသည်မှာ မြင်သူများ သတိထားမိစရာဖြစ်နေသည်။
သူ့တပည့်မ လေး ပွင့်ဖြူ ပင်လျှင် သူ့ဆရာဘာကြောင့် ဒိလောက် ပြုံးဖြီး ဖြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်ဟု စဉ်းစားမ၇ဖြစ်နေသည်။ မဆူမဟောက် သဘောကောင်းသော ဆရာဖြစ်သော်လည်း ခါတိုင်းဆို ဒီလောက်တော့ မဖြီး။ တည်တည် တန့်တန့် နေတတ်သော ဆရာပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်နေ၍ သိချင်နေသည်။
ချဲထီများပေါက်နေလို့လား။ သို့သော် သူ့ဆရာ လောင်းကစား အသေမုန်းသူမို့ ဒါလည်း မဖြစ်နိုင်။
သူဌေး ဦးအောင်မင်း ကများ ရာထူးတိုးပေးလိုက်လို့လား။ ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်။ ဒီရုံးမှာ ဆရာက အကြီးဆုံး။ အထွေထွေမန်နေဂျာ ရာထူးယူထားသူမို့ ထပ်တိုးစရာ အကြောင်းမရှိ။
လခများတိုးပေးလိုက်လို့လား ။ ဒါလည်း ကပ်စေးနဲ သူဌေးမို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အတော်နည်းနေသည်။
ဒါမှမဟုတ် ဆရာ့ချစ်ချစ်ကြီး ဆရာ့ ကို လာခဲ့နီး အနမ်းတွေ ပေးလိုက်လို့များလား တွေးပြီး ပွင့်ဖြူ ပါ ခွီ ကနဲဖြစ်သွားသည်။
ဆရာ မျက်နှာ ပြုံးနေပါလား ။ ဘာတွေ သဘောကျနေလည်းဆရာ။
ပွင့်ဖြူ မအောင့်နိုင်တော့။ ဆရာတပည့်ပေမဲ့ ဆရာ့ကိုမေးရဲ ဆိုရဲရှိသည်။
သြော် အေး မင်းခုန ကပေးတဲ့ စာ လေကွာ။
ပွင့်ဖြူ အခုမှ သတိရလိုက်သည် ။ သူ ဆရာ့ကို နိုင်ငံခြားမှ စာတစ်စောင်ရောက်နေ၍ပေးလိုက်သည်။
အေးကွ အဲ့ဒိစာထဲမှာ ဆရာတို့ ဟိုတယ် ၃၆ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ဟိုတယ် နဲ့ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၂၀၁၁ ဆုရလို့ကွ။
ဟယ် ဟုတ်လား ဆရာ။ ၀မ်းသာစရာကြီး ။ ဘယ်ကပေးတာလဲဆရာ။
စပိန်နိုင်ငံ ။ မက်ဒရစ်မြို့ က ကွ။ အဲ့ဒါ ဆု လာယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတာကွ။
ကောင်းလိုက်တာ ဆရာရယ်။ ဟို ဒန်ပေါက်ဆိုင်တို့။ အချို့ ဟိုတယ် တွေက သူတို့ ရပြီး ဆုသွားယူတာတွေ တွေ့ဘူးတယ် ဆရာ ။ အဲ့ဒီ့တုန်းက အားကျနေတာ ။
အေးကွ ။ အေးကွ ဒါမှ သူဌေးလာရင် ငါတို့ ၀န်ထမ်းတွေ ကြိုးစားလို့ ရတာ။ အခု တွေ့ပြီမဟုတ်လားလို့ ကောင်းကောင်း ပြန်ကြွားနိုင်မှာ။ အလကားနေရင်း အမြဲတန်းပြုံးနေဖို့ ၊ ၀န်ဆောင်မှု့ ကောင်းကောင်းပေးဖို့၊ ဧည့်သည်တွေကို စိတ်ရှည်ဖို့ အမြဲတန်း လက်ချာ ရိုက်ခံထိနေတာ ။ သူ လာမှပြပြီး ကြွားလိုက်ဦးမယ်။
ဒါကြောင့် ဆရာ ပြုံးနေတာကိုး ။ ဆုက ဘယ်မှာ သွားယူရမှာလည်း ဆရာ။
စပိန်မှာ လေကွာ။ အင်း သွားယူဖို့ euro 3950 တော့ ကျမယ်ကွ ။ သူဌေး ဦးကပ်စီး ထုတ်ပေးပါ့မလားတော့မသိဘူး ။ ဒါမှ မဟုတ် သူ သွားမလားမသိဘူး ။
ဆရာကလည်း ၊သူက သူဌေးဖြစ်ပေမဲ့ အင်္ဂလ်ိပ်လို ကောင်းကောင်းမှ မပြောနိုင်တာ ။ ကြည့်နေ ဆရာ့ ကိုဘဲလွှတ်မှာပါ။
အေး။ အေး အဲ့ဒါကြောင့် ဆရာ ပျော်နေတာကွ ။ စပိန်လေး ဘာလေး ရောက်ဖူး ဦးမယ်ဆိုပြီး။ ကဲကဲ လုပ်လုပ် တော်ကြာနေ သူဌေး ရောက်လာ မှာ ။ သူ့ကို ဖုန်းဆက်ပြောထားပြီးပြီ။
ဘာပြောလည်း ဆရာ။ သူ ရော ပျော်သွားလား ။
ဘာမှတော့ မပြောဘူးကွ ။ အင်း အင်း လို့ဘဲပြောပြီး ဖုန်းချသွားတယ်။
သူဌေး အခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာသော ဦးဇော်မောင် မျက်နှာသည် နဂို ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်နေသည် ကို ပွင့်ဖြူ သတိထားမိလိုက်သည် ။
ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့် ။ ကြည့်ရတာ သူဌေး ဦးကပ်စေး ၊ ဆရာ့ကို ပေးမသွားဘဲ သူကိုယ်တိုင် သွားမလို့နဲ့တူတယ် ဟု တွေးနေမိသည် ။ သူဌေး ရှိနေ၍ အခြေအနေ ကို သူ မမေးရဲသေး ။
ထမင်းစားချိန် သူဌေး ပြန်သွားသွား ခြင်း အကျိုးအကြောင်းသိချင်နေသော ပွင့်ဖြူ မအောင့်နိုင်ဘဲ ဦးဇော်မောင် ကိုမေးလိုက်မိသည် ။
ဆရာ။ ဆရာ ဘယ်လိုလည်း ။ ဆရာ့ ကို ပေးမသွားဘူး လား ။ သူကိုယ်တိုင် သွားမှာတဲ့လား ။ ကျွန်မတို့ကို ချီးကျုးသွားသေးလား ဟင် ။
မအောင့်နိုင်သော ပွင့်ဖြူ မေးခွန်းများတလစပ် မေးလိုက်မိသည် ။
ဦးဇော်မောင် က မချိပြုံးဖြင့်
ချီးကျူးသွားတယ်လေ ။ မင်းတို့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အလိမ်ခံမလို့ လား တဲ့ ။
အင် ..ဘယ်လို ဘယ်လို ။ ဘယ်လို လိမ်မှာ လည်း ဆရာ ကလည်း ။ ရှေ့မှာ ရထားတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ် ။ ပြီး ဆရာ့ပိုက်ဆံက ဘဏ်ကနေလည်း လွဲပေးရမှာ မဟုတ် ။ သွားပြီး ဆု ယူတော့မှ ပေးရမှာကိုး။ ဆရာ မပြောပြလိုက်ဘူးလား ။ ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေ နဲ့ဆိုတာ။
ပြောလိုက်တာပေါ့ကွာ ။ ပိုက်ဆံက အဲ့ဒီ စပိန်ရောက်မှ ပေးရမှာ ။ သူတို့ က ဟိုတယ် မှာ နှစ်ညထားပေးပြီး နှစ်ယောက်လာ လို့ရတယ် ။ ပြီး ညစာ စားပွဲမှာ ဒီဆုကို စပိန်က လူကြီးလူကောင်းများ၊ ခရီးသွားလာရေးနဲ့ ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင် ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များရှေ့မှာ ပေးမှာဆိုတာ။
ပြီး အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပြနေတဲ့ International Tourism Fair ကိုလည်း လိုက်ပို့မယ်။ သူတို့ရဲ့ member 7000 ကျော်ပါတဲ့ CD ROM ၇မယ် ။ သူတို့ ဆုကိုလည်း ကိုယ့် ဟိုတယ် လုပ်ငန်းတွေမှာ ကြော်ငြာ ခွင့်ရပြီး လူတွေ ပို စိတ်ဝင်စားစေမယ် စသဖြင့် ပေါ့ကွာ။
နောက် ဆု ရတဲ့ ကုမ္မဏီတွေ ရဲ့ လိပ်စာ၊ ဘာတွေ လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ စာအုပ် စသဖြင့် ရမယ်လို့ ပြောလိုက်တာဘဲ။
အဲ့တော့ ဘာပြောလဲ ဆရာ။
ကဲ ကဲ ဟုတ်ပါပြီ တဲ့ ။ အဲ့ဒါ ခဏထား ။ မင်း ဟိုတယ် ကို ဆုပေးရအောင် မင်းဟိုတယ် ကို ဘယ်သူတွေက ထောက်ခံတာလည်း ။ ဘယ်သူတွေ ရောက်ဘူးလို့လဲ ။ ဘာကို ကြည့်ပြီး ဆုရသင့်သော ဟိုတယ်လို့ ပြောတာလည်း ။ သူတို့ အဖွဲ့ အစည်းက မင်းဟိုတယ် ကိုရောက်ဘူးလို့လားတဲ့ ။
အင် . ဟုတ်သားဘဲ ။ ဘယ်သူမှာလည်း ဘာမှ လာ အကဲဖြတ်တာလည်း မရှိဘဲနဲ့ ။ဘယ်လို သိမလဲနော် ဆရာ။ ပေးသင့် မပေးသင့် ဆိုတာကို ။
အေးလေ ။ ငါလည်း ဘာဖြေရမှန်း မသိဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ပြောလိုက်သေးတယ်ကွ ။ ကျွန်တော်တို့မသိဘဲ လာ အကဲဖြတ်သွားရင်ကောလို့ ။
မင်း မအ စမ်းပါနဲ့ကွာတဲ့ ။ မင်းပေးရမဲ့ euro 3950 ကိုကြည့် ။ မင်းကို အလကား ပေးတာ မဟုတ်ဘူး ။
မင်းတည်းမဲ့ အခန်းခ နှစ်ရက်အတွက် ဘယ်လောက်ကျမလဲ ။ ထား တစ်ရက် ၂၅၀ နှစ်ရက် ၅၀၀ ။ ညစာစားပွဲနဲ့ လိုက်ပိုတဲ့ အခ – ဆု တံဆိပ်ဘိုး ။ စာအုပ်ဘိုး။ အားလုံးပေါင်း ၅၀၀ ထားဦး ။ သူမင်းအတွက်ကုန်မှာ ယူရို ၁၀၀၀ အပြင် မပိုဘူး။ ကျန်တဲ့ ယူရို ၂၉၅၀ တိန်ကနဲ သူ တို့ အဖွဲ့ ရလိုက်ပြီ။ တကမ္ဘာလုံးလှည့် လုပ်တာဆိုတော့ တစ်နှစ် အဖွဲ့အစည်း ၅၀ လောက်လာယူရင် ယူရို တစ်သိန်းလေးသောင်း လောက်ကိုက်သွားပြီ။ သူတို့လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က အင်တာနက်ကနေ လိပ်စာတွေ လိုက်စု။ ဒီပိုက်ဆံလောက် တတ်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ သူတွေဆီ စာပို့။ ပြီး အဲ့ဒီ ရက်နားကျတော့မှ စာအုပ်လေးထုတ် ။တစ်ပါတ်လောက် အလုပ်ရှုပ်လိုက်ပြီး ကဲ့ယူလိုက်တာဘဲ။
ဟယ်.. ဒါပေမဲ့ ဆရာကလည်း ကျွန်မတို့ကလည်း ဒီလိုဆုမျိုးရတဲ့ ဟိုတယ် ဆိုရင် လူတွေ အထင်ကြီးမှာပေါ့ ။ အဲ့ဒီလို သူ့ဆုကို အကြောင်းပြု ကြော်ငြာလို့ ရတာဘဲ။
သူဌေး ကဆက်ပြောလိုက်သေးတယ် ။ မင်းတို့ အဲ့ဒီလို ကြော်ငြာလို့ လူ အထင်ကြီးတာလည်း ခံရင်ခံရမှာပေါ့တဲ့ ။ သေချာတာတော့ မင်းတို့ က သူ့ကို ဆက်ပြီး ကြော်ငြာပေးနေတာတဲ့ ။ မင်းတို့လို မတွက်မိတဲ့ သူတွေကလည်း မင်းတို့ အခု သူများရတာ ကို ကြည့် အဟုတ်အောင်းမေ့ပြီး အဲ့ဒီ့ ဆု လိုချင်နေတာ လေတဲ့။
ပြောသေးတယ်။ မင်းတို့ ကို တရားဝင် လိမ်ပြီး မင်းတို့ ကလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အလိမ်ခံနေတာတဲ့ ။ ပြီး မင်းတို့ ကနေ တစ်ဆင့် မသိတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ကိုယ့် ကာစတန်မာတွေကို ကိုယ်ကိုယ်၌ က မသိဘဲ သတိမထားမိဘဲ ဆက်ပြီးလိမ်နေကြတာတဲ့။
အဲ့ဒီလို ဆုမျိုးထက် ကိုယ့် ဧည့်သည်တစ်ယောက်က ချီးကျုးသွားတဲ့အမှန်အကန် စာတစ်စောင်ဘဲလိုချင်ပါတယ်တဲ့။
နောင် ဘယ်နိုင်ငံက ဘာဆု ရထားတာ ဆိုပြီးကြော်ငြာ ကြော်ငြာအရမ်းမယုံနဲ့တဲ့ဟေ့။ အလိမ်မခံနဲ့တဲ့။
သဘောပေါက်ပြီဆရာ။ ဟို ပိုက်ဆံ နဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ၀ယ်သလိုပေါ့နော် ..
အေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ။
မသိတဲ့လူတွေကိုညာစါးနေတဲ့ဆုလို.ထင်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတဲ့ Tour Company တွေကိုပေးတာကြုံဖူးပါတယ်။
အဲ မို says:
ဂလိုကိုး…. အင်း ဒေါ်ထူးစမ်းပြောမှပဲသိတော့တယ်.. ဒါဆို ငါတို့ ဟိုတယ်ဘာဆုရတယ် ဘာညာဆို… ညာတီးခံလိုက်ပြီလို့ပြောတာနဲ့ အတူတူပဲပေါ့နော်…
မြန်မာပြည်ထဲ.. လူတွေကို… အသိဥာဏ်ဖွင့်ပေးနိုင်လို့ပါ..။
မတ်တပ်ရပ် လက်ခုတ်အကျယ်ကြီး တီးသွားပါတယ်ဗျာ…
“Standing Ovation” ပါနော်။
လက်မတစ်ချောင်းထောင်ခဲ့ပါတယ်။ လူလိမ်အကြောင်းတွေ တောက်လျှောက်ရေးပြီးပညာပေးနေတဲ့ကိုထူးဆန်း၊
နေအေးလိမ်နည်းစာအုပ်လေးရှာဖွေပြီးရေးပေးပါလားဗျို့၊ ကြားပဲကြားဖူးတယ် အကုန်မဖတ်ဖူးသေးဘူး။
အင်တာနက်ကနေ ရွှေထုပ်ချလိမ်နည်းတစ်မျိုး ပေ့ါ။
ယူရို ၃၉၅၀ အတွက်မို့ လိမ်တယ်လို့ မထင်နဲ့။ ဒေါ်လှ ၅၀၀ လောက်လည်း လိမ်တာပဲ။
ကျမတို့အလုပ်မှာလည်း ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ယ်လိုပါတယ်ဆိုပြီး ဈေးပြော၊
TT payment နဲ့ ပေးမယ်ပြောတော့ မလိမ်လောက်ပါဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
နောက်ဆုံး အရောင်းအ၀ယ်သဘောတူပြီးတဲ့အခါကျတော သူ့နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကို မှတ်ပုံတင်ရမှာမို့ ဒေါ်လှ ၅၀၀ ပို့ရမယ်တဲ့။
အဲဒါနဲ့ သိပ်မသင်္ကာတာနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်အတွက်ပို့ရမယ့် ငွေထဲက နှုတ်ယူပါလို့ ပြောလိုက်တော့ နောက်မလာတော့ဘူး။
အဲဒါကြောင့် အစကတည်းက အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တာ လွယ်လှချည်လားလို့ ထင်မိတာ….
Htoosan………..Many thanks for that kind of valuable post. We can consideration in future.
ကျနော်သာ အာစိလောက် လိမ်နည်းတွေသိရင် လုပ်စားနေတာကြာဘီ
လောလောဆယ်တော့ အာစိသင်တန်း မှန်မှန်တတ်နေပါကြောင်း
များအကြော်ဆိုင်ကိုလဲ “အစားအသောက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၂၀၁၁ ဆု”
ရှာကြံ ဂုဏ်ယူချင်တဲ့သူများကတော့ အလိမ်ခံရမှန်းသိသိနဲ့ကို ဆုတက်ယူချင်တာ။
တစ်သက်လုံးဘယ်သူကမှ ဘာဆုမှ ပေးတာမခံရဘူးတော့ ယူချင်တာပဲသိတယ်။
အဲဒီလို ဆုမျိုးတွေကို ကမ္ဘာ့အတုံးဆုံး ဆုဖြစ်ကြောင်း ငပေါများသာယူကြောင်း လူတွေများများသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရင် ဒါတွေပျောက်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဘွဲဝယ်သလိုမျိုးပဲပေါ့။ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ဆိုတာ နာမည်ရှေ့တပ်ရင် ငပေါပဲ ဆိုပြီး အသံကျယ်ကျယ်သာထွက်ပေး။ အဲသလိုဘွဲ့တွေကို ခွေးအတွက်တောင် ဝယ်ပြီး ဒေါက်တာဂုတ်ကျား လို့တပ်လို့ရတယ် လို့သာ အသံကျယ်ကျယ်ပြောပေးရင် အေးမှာပဲ။
အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ၀ဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါက်တာဂုတ်ကျား ..ဟစ်စ် အိပ်ဆယ်လန်စီ…
အဲသည် ဆုတံဆိပ်ပေးပြီးလိမ်တာ နယ်ပယ်တိုင်းလိုမှာပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က
မြန်မာပြည်ရဲ့ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီကြီးတခုတောင် အဲသည်လို
(ကျုပ်လဲ ငတ်ငတ်နဲ့ သွားစားလိုက်သေးတယ်။)
အဲဒီကရတဲ့ တံဆိပ်ကြီးတောင် သူ့ကုမ္ပဏီကြော်ငြာမှာထည့်ထားတာ-
နောက် အင်ကြီးမှန်း သိကုန်ပြောကုန်တော့မှ
Ko Zay၊ အဲ မို၊ ဦးဦးပါလေရာ ရေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အဲ့ဒီ့လို ဆုသွားယူပြီး ဂျာနယ်တွေ ၊ သတင်း စာတွေထဲထည့် အကြီးအကျယ် ဂုဏ်ပြုနေသူတွေ ရှိကြတယ်လေ။
ှတကယ်တမ်း ဆက်စပ်တွေးရင် ခံရတာက မသိတဲ့ ပြည်သူတွေပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေက အလိမ်ခံရပေမဲ့ သူတို့က ဒါနဲ့ပြန်လုပ်စားလို့ ရနေပြီး အချောင်ခံရတာက မသိတဲ့ သူတွေပါ။
ဆရာမကြီး။သူကြီး။ ဂီ ၊ အညာတမာ နဲံ့ ကိုလင်းဝေ တို့ အားပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဟီး .. ကျွန်တော် ရေးဖြစ်သွားတာက ဆရာမ အိတုန်ရဲ့ ဖုန်းခေါ်ပြီးလိမ်မလို့ ကြိုးစားတာဖတ်ရတာ ရယ် ၊ ကျွန်တော့် ပိုစ်မှာ ကိုမင်းဇော် က ကျွန်တော့်ကိုမသိဘဲ သူ သုံးသိန်း လှုချင်ကြောင်း ရေးလာလို့ ရေူးဖြစ်သွားတာပါ။ ကိုကြောင်လေးနဲ့ စိန်ပေါက်ရေ .. ဘယ်သူတွေ အလိမ်ခံရသေးလည်း လက်တို့ပြီး လိုက်မေးလိုက်ဦးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကုန်နေပြီ ။ :grin:
မမရေ ။ ဘယ်နည်းနဲ့ လိမ်မယ်မှန်းခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ လိမ်ရန်ကြိုးစားနေတဲ့ e-mail တွေက နေ့စဉ်လို ရနေတာပါဘဲ။ ပိုက်ဆံလွဲချင်တာနဲံ့ ၊ သေခါနီးဖြစ်နေလို့ ပေးသွားချင်ရတာနဲ့ ၊ e-mail ကမ်စမ်းမဲပေါက်ရတာ နဲ့ ၊ လာပြီးရင်းနှီးမြုတ်နှံချင်ရတာနဲ့ ၊ အဲ့ဒီ spam mail တွေ ထိုင်ဖျက်ရတာ အလုပ်တစ်ခု။
ကြီးမိုက်ရေ ..ရွှေဘုံသာလမ်းမှာ တံဆိပ်သွားလုပ်ပြီး အကြော်အိုးမှာ ချိတ်ထားလိုက်ပေါ့။ မြန်မာငွေ တစ်သောင်းလောက်ဘဲကုန်ပြီ နိုင်ငံတကာ ဆုရှင်ဖြစ်သွားမယ် ။ :grin:
အစိုးရဌာန တစ်ခုတောင် အဲဒီဆုမျိုးသွားယူထားတယ်လို့ ကြားမိပါတယ်။
DV ပေါက်ပါတယ်ဆိုပြီး အပီအပြင်ပို့တဲ့ mail ကလည်း အလိမ်ပါပဲ။
ကထူးဆန်း ရွာသားတွေအပေါ် တာဝန်ကျေပါတယ်။
(အဲဒီစာလေးပါ scan လုပ်ပြီးတင်ပေးရင် ပိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်၊သူတို့က တရားစွဲနိုင်မလားတော့ လေ့လာကြည့်အုံးနော်.)
လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များ ဆိုတာကကော အမှန်အကန်လား၊အကြံအဖန်လား ပြောပြပါအုံး။
အန်တီပဒုမ္မာ ရေ . လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး ခင်ဗျ။
ကျွန်တော် လုပ်လို့ သူကြီး အလုပ်ရှုပ်မှာ စိုးလို့ scan မတင်တာပါ ။ စာက တော့ ကျွန်တော် တစ်နေ့တော့ ရေးမယ်ဆိုပြီး သိမ်းထားလို့ ရှိပါသေးတယ်။
ကိုထူးဆန်း ရေ ပထမ တစ်ခေါက်က ဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ လက်မထောင်ခဲ့သေးတယ်ဗျ
အခုက ဒုတိယအကြိမ် အဲဒီလို လိမ်တာမျိုးတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံရတာများလာတော့
အရာရာကို သံသယ မျက်စေ့နဲ့ ကြည့်မိလာတယ်
တစ်ခုခုဆို ငါ့ ကို လိမ်နေတာလားဆိုတဲ့ အတွေး က အလိုလို ၀င်လာတယ်
ကြာလာတော့ အမှန်အကန်သမားတွေအတွက် မျက်နှာပူလာတယ်ဗျို့
နောက်ပို့စ် လေးတွေ ဆက်တင်ပါဦးနော
ခိခိ .. ဦးတေဇ တစ်ယောက်လည်း အလိမ်ခံနေရပြီ ။
မိမိရဲ့ ထူးဟိုတယ်များအုပ်စုလက်အောက်ရှိ ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ်သည် 2014 World Luxury Hotel Awards ကိုရရှိကြောင်းကို အကဲဖြတ်အဖွဲ့မှ အသိပေး အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ မိမိဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှူနှင့် မီဒီယာအပါအဝင်အဖက်ဖက်မှနိုင်ငံရေး ဖိအားပေးခံထားရစဉ် မိမိနှင့်အတူ မိမိ၏ Htoo Group of Companies မှ အရာထမ်း၊ အမှူထမ်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှူတို့နှင့်အတူ အောင်မြင်မှူရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းအပေါ် များစွာ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
ဟိုတယ်နဲ့ခရီးစီးပွားရေး လုပ်ငန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနာဂါတ်ကာလအတွက် များစွာ ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သလို အလွှာအသီးသီးတွင်ရှိသူတို့အတွက်လည်း အကျိုးရှိစေသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဟာ နိုင်ငံ့ဝင်ငွေ တိုးပွားစေသလို နိုင်ငံရဲ့ image ကောင်းများတည်ဆောက်နိုင်စေမယ့် နိုင်ငံအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ထူးကုမ္ပဏီများအုပ်စု အနေနဲ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များသို့ ပညာသင် စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးအဆင့်မီ ဟိုတယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာတို့ နောက်မကျဘဲ ရင်ဘောင်တန်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းကို ပြသလိုသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသား နယ်ခံဝန်ထမ်းများကိုသာ ဦးစားပေးခန့်ထားဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသူ တိုင်းရင်းသားတို့အနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းကောင်းများရရှိခြင်း အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း စတဲ့အသီးအပွင့်များ ရရှိဖို့အတွက် မိမိတို့အားလုံး အတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ကြိုးပမ်းမှုရလဒ်ကို မိမိတို့ယခုရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောင်ရေရှည်အတွက်လည်း ထာဝရ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် တိုင်းပြည်အနာဂါတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် တတ်စွမ်းသမျှကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ဘီယာဆု ဒေါက်တာဆု ဘာဆု ညာဆုတွေကိုတော့ တမင်တကာ ဖိန့်လို့ရအောင် သွားယူထားကြတယ်ဆိုတာ ဘောပေါက်ထားဒယ် …
အဲ့ဒီ ဟိုတယ်ဆု ရထားရင်တော့ အတော်ဟုတ်တယ် မှတ်နေတာ ..
ဒါလည်း လိမ်ဆင်ကြီးပဲကိုး ….
ဂလိုဆို .. ခု .. ဘိုတေဇ လည်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အလိမ်ခံလိုက်ပြီကိုး ….
၂၀၀၀ခုလောက်ကစ ကမ်ပနီတွေကို အင်တာနက်လိုင်းချပေးတော့ မေးလ်စသုံးဖြစ်တယ်… ဗဟုသုတတွေ တပုံတပင်ရခဲ့တယ်…
အသိတစ်အတွက် ထွန်းလင်းပြတဲ့ လမ်းပြကြယ်လိုမျိုး ပိုစ့်ဘဲဗျာ။
ကြိုက်တယ် ပြီးတော့ စာရေးသူကိုလည်း လက်မထောင်ကာ အားပေးသွားတယ်ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံကလည်း နိုင်ငံခြားဆုတံဆိပ်ဆိုတာနဲ့ လွယ်လွယ်ယုံ မျက်စိမှိတ် အထင်ကြီးတတ်ကြတာနဲ့တော့ ကွက်တိပဲ။ လုပ်စားတဲ့သူတွေကလည်းတော်တော်တော်ပါတယ်။ တံဆိပ်ကိုစာတိုက်က နေပို့ခိုင်းလိုက်လို့မရဘူးလား။ သွားမယူရင်မပေးတော့ဘူးလား။
ယူရို 3950-1000=2950 ဆိုတော့ တယောက်ကို ၄၅သိန်းလောက်တော့မြတ်မယ်။ ဗဟုသုတရလို့ ကျေးဇူးပါ။
အင်တာနက်တွေစပေါ်ခါစက အင်တာနက်ကနေ ကြော်ငြာတော့ ၀ယ်မည့်သူကဆက်သွယ်လာတယ်။ TT ပေးမှရောင်းမယ်ဆိုတော့ပေးမယ်တဲ့။ လောလောဆယ်သူတို့နိုင်ငံကိုတခါမှမပို့ဘူးသေးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်လို့ Register လုပ်ဖို့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကိုပို့ပေးပါတဲ့။ မင်းပို့မည့် TT ထဲကနှုပ်ယူထားလိုက်လို့ပြောတော့ ကိစ္စပြတ်သွားရော။
ခိခိ…ကထူးဆန်းရဲ့ပို့စ်ကို မောင်တေဇ မဖတ်ဖူးတာသေချာသွားပြီ…ဒီပို့စ်ကို သူ့ဝေါပေါ်တင်ဗျာ
တချို့ က.. လိမ်စရာမရှိ ရင်..
ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ် လိမ်နေတတ်တယ်.. ။
မေတ္တာရှင်လိုလို ဘာလိုလို နဲ့ ..ခွင့်လွှတ်လိုက်တတ်ကြတယ်.. ။
ကိုထူးဆန်းရဲ့ မျက်စိပွင့်စေတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုပဲ…..
လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတောင် သူတို့ဘာမက်တယ်ဆိုတာ သိထားရင် အဲ့ဒါနဲ့မျှားပြီး လိမ်တယ်….
ဒီပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်…။ အရေးအသားလဲ ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းတစ်ပုဒ်အတွက်လဲ လက်မထောင်သွားပါတယ် ကိုထူးဆန်းရေ့…..